DHAGAYSO:Madaxweyne Xaaf oo weerar ku qaaday Farmaajo & Siro badan oo uu banaanka keenay – Puntlandtimes
DHAGAYSO:Madaxweyne Xaaf oo weerar ku qaaday Farmaajo & Siro badan oo uu banaanka keenay
February 23, 2019 Puntland PL
GALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo maalmahan dambe safar shaqo ku joogay dalka Keynya ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha oo safarkiisa ka warbixiyay ayaa waxa u sheegay in uu Keynya kula soo kulmay hay’addaha deeq-bixiyaasha ah ayna u balan qaadan in hada kadib Galmudug xaquuqda ay leedahay heli doonto ayna kala shaqeyn doonaan hormarka iyo dhismaha Galmudug.
Waxa uu madaxweynuhu sheegay in dowladda federaalka ah balamihii ay galeen waxba ka suuragali waayeen waxa uuna intaasi ku daray in wada hadalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Farmaajo ku dhexmaray Garowe uu weli fulin.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Gelle Xaaf ayaa dadka reer Galmudug ugu baaqay in ay isku tashtaan oo ay deegaankooda iyagu hormarsadaan waxaa uuna intaas ku daray in ay dhowaan imaan doonaan hay’addihii dhisi lahaa degmooyinka
Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dagaal kula jirto Galmudug isla markaasna ay isku dayeyso in ay ciidamada qaybta 21-aad iyo NISA u adeegsato caburin iyo in ay u isticmaalaan si khaldan taasina ay ka hortagi doonaan oo aysan marnaba suurta gali doonin.
Kooxda Nabar iyo Naxdin waa tirtiri rabta reer Galmudug sida muuqata.
Shan kun qofood ayaa Galmudug ku dhintay ka dib marka madaxweyne Farmaajo lacagti lagu caawin laha Galmudug geeyay gobolka Gedo iyo beeshiis si xaflado iyo tumasho iyo qaad lagu cuno lacagta lagu badbaadin laha reer Galmudug. Aad ayaa uga xumahay Marexaanka saan uu dhaqmahaya si ay Hawiye uu babiiyaan. Marexaan ma metalahayo beesha Daarood waa ka goosteen beesha waana ayaga keligood qqxa saan uu dilahaya Hawiye.
Marexaan hada nahay madaxweynaha dalka anaga leh. Marexaan hada nahay dad uma haysano burcad badeedka dhabayaco-mahbar-land meel walba cay iyo qurun la taagan.